Rooble “Waxaan farayaa cid walbo in nabadda la wada ilaaliyo” | Dhacdo
Home Wararka Maanta Rooble “Waxaan farayaa cid walbo in nabadda la wada ilaaliyo”
Rooble “Waxaan farayaa cid walbo in nabadda la wada ilaaliyo”
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka hadlay dagaalkii shalay illaa xalay ka dhacay qaybo ka mida Magaalada Muqdisho.
“Waxaan rabaa halkaan inaan uga sheego shacabka Soomaaliyeed inaan ka xumahay dhibaatadii dhacday ee lagu qalqal-gelinayay amniga iyo nabadda Magaaladan Muqdisho, gaar ahaan bishan barakeysan ee mudan xormada iyo cibaadada.” Ayuu yiri Ra’iisal Wasaaraha Somaliya.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa ku baaqay in cid kasta ay dhowrto nabadda, isla-markaana loo turo bulshada ku dhaqan Caasimadda Muqdisho.
“Waxaan farayaa cid walbo in nabadda la wada ilaaliyo oo la wada dhowro, bulshadana loo turo.” Ayuu yiri Ra’iisal Wasaaraha oo saaka bartiisa Twitter-ka soo dhigay muuqaal uu kaga hadlayay xaaladda ka taagan magaalada.
Maxamed Xuseen Rooble, Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda ayaa hay’adaha ammaanka faray inay gutaan waajibaadkooda qaran, ayna ilaaliyaan amniga shacabka, kana hortaggaan khatar kasta oo dhibaato ku keeni karta bulshada.
“Ciidamada amniga waxaan farayaa inay gutaan waajibaadkooda qaran, oo ay dhowraan amniga shacabka iyo ka hortagga khatar kasta oo dhibaato u keeni karta bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada Magaalada Muqdisho.” Ayuu yiri Ra’iisal Wasaare Rooble.
Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa tilmaamay in wadahadal iyo is afgarad ay yihiin wadada keliya ee xasillooni siyaasadeed lagu gaari karo.
“Dowladdu waxay aaminsan tahay in wadahadal iyo is afgarad uu yahay jidka ugu habboon ee wax kasta lagu xalin karo. Hawshaas oo aan bilaabay anigoo rajeynaya in aan ku guuleysan doono, Insha’Allah.” Ayuu yiri Rooble.
Rooble ayaa ugu dambeen yiri “Waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan waxgaradka, culimada, bulshada rayidka, ganacsatada, haweenka iyo dhalinyarada in aan ka wada shaqayno xasilloonida iyo nabadgelyada dalkeena, gaar ahaan Magaalada Muqdisho.”
Previous articleMaxaa ka jira in lala wareegay Xarunta Degmada Howlwadaag
Next articleWaan-waan laga dhex bilaabay dowladda & mucaaradka iyo xabad joojin ay aqbaleen